"Dropshot" - uhlelo kuhlaselwa e-USSR. impi yomshoshaphansi
Ngemva eJalimane lobuNazi wahlulwa, US kwaba njalo esaba amandla Army Soviet, baphoqeleka ukuthuthukisa isu ekhethekile - "Dropshot". Uhlelo zokuhlasela iSoviet Union ngamandla amakhulu nabasizi balo okuhloswe ukumisa ehlasela futhi eminye baseNtshonalanga Yurophu, eMpumalanga Ephakathi Japan.
Isu eziyisisekelo yasungulwa ngu nePentagon kusukela ekuqaleni kuka-1945. Senzeka ngaleso sikhathi kwakunalowo okwakuthiwa usongo okuthiwa "communisation" okwalandela kulo eMpumalanga Yurophu, kanye version craziest ngenhloso kukaStalin ukuba bahlasele uthi entshonalanga ngaphansi kwebhaxa ukusula kubo kusukela lonke abahlali German.
I izimfanelo Okunye esasikwenza imisebenzi eminingana eyedlule American. Igama ikhodi ngokuhlasela USSR, plan ishintshile izikhathi eziningana, njengoba ingxenye enkulu kimi nemihlahlandlela kwayo okusemqoka. NePentagon bahlakulele izenzo cishe amaKhomanisi futhi yakhelwe behlola izindlela zabo zokuqeqesha counteraction. Endaweni eyodwa kwafika nomunye nesu elisha, esikhundleni komunye nomunye.
"Ukusebenza Dropshot": Ingemuva
Manje-ke ukuthi kukhona ezinye izinhlelo ezithile ukuthi abavamile baseMelika alazi ezaziwayo. Lo msebenzi:
"Totaliti" - yasungulwa ngu D. Eisenhower phakathi neMpi Yezwe II,
"Charoitir" - inguqulo ebuyekeziwe, sacala kusebenta ehlobo lika-1948;
"Fleetwood" - wayeselulungele weminyaka engu wesithathu ekupheleni kwempi yezwe yesibili;
"ETroyan" - uhlelo lakhiwe ilindele eminyakeni esigamekweni sokuqhunyiswa Union 01.01.1957;
"Dropshot" lisikisela ukuthi ukuqhuma kwamabhomu okungazelelwe kumele kuqale 01.01.1957 ngonyaka.
Njengoba kubonakala imibhalo declassified, empeleni US kuhlelwe ukuba yilo yini impi yezwe yesithathu, okuyinto yayiyoba amandla enuzi.
AbaseMelika izikhali zenuzi ibonakala
Ngokokuqala ngqá plan US "Dropshot" waba uzwakalise e-White House ngemva Conference Potsdam, lapho abaholi States enqobile iqhaza: United States, Great Britain eSoviet Union. Truman efika emhlanganweni imimoya okusezingeni eliphezulu: bangaphambi ugijimela test bathwalwa sezikhali zenuzi. Waba inhloko isimo zenuzi.
Ake sihlaziye izifingqo zama zomlando anobude esithile, ukwenza iziphetho ke ezifanele.
Umhlangano kusukela 17,07 eminyakeni 08.02.1945.
senziwa A run Isivivinyo 16.07.1945 ngonyaka - ngosuku olwandulela umhlangano.
6 nele-9 August 1945, ezimbili ezifana igobolondo ziphele nya ka Nagasaki naseHiroshima.
Isiphetho wukuthi nePentagon wazama isivivinyo zayo zokuqala yenuzi ngaphambi kokuba kuqale umhlangano, kanye nokuqhunyiswa kwamabhomu athomu Japan - ekupheleni. Ngakho, e-United States bazama ukwenza ngokwaso njengoba isimo kuphela emhlabeni, ukuba izikhali zenuzi.
Ukubhekisela lokuqala etholakalayo emphakathini komphakathi womhlaba wonke, uvele 1978. US uchwepheshe A. Brown, osebenzela izimfihlakalo seMpi yoMhlaba yesiBili, ishicilele eziningi imibhalo eqinisekisa ukuthi i-United States iye yasungula ngempela isu of "Dropshot" - uhlelo kuhlaselwa e-USSR. Ukushayela i-American isenzo "inkululeko" sebutho kanje.
Njengoba kushiwo ngenhla, owayelwa ukuqala January 1, 1957.
Esikhatsini lesifisha ihlelelwe kabusha kokuphindela eSoviet Union 300 Ammo enuzi kanye 250 000 amathani amabhomu ezivamile kanye amagobolondo. Ngenxa yalokho zokuqhunyiswa kwebhomu Kwakuhlelwe ukuba abhubhise okungenani 85% umkhakha wezwe, kuze 96% of the umkhakha-friendly Union kanye 6.7 izigidi ezingu labantu yembuso.
Isinyathelo esilandelayo - ukufika NATO phansi amabutho. Bahlele ukubandakanya kulokhu kuhlasela 250 ukuhlukana, kuhlanganise amabutho amaZwe Asizanayo bebefanele e inani amayunithi 38. izenzo Umsebenzi ngokusekela zezindiza, e isamba 5 wamabutho (7,400 izindiza). Ngesikhathi esifanayo, zonke ulwandle nolwandle ukuxhumana okufanele libanjwe NATO Navy.
Esesithathu isinyathelo "Operation Dropshot" - uhlelo ukubhubhisa ngokuphelele iSoviet Union uyisule kusukela nebalazwe. Ngale ngelosi ukusetshenziswa zonke izinhlobo ezaziwayo zama-izikhali: zenuzi, elincane, amakhemikhali, umonakalo omkhulu obangelwa imisebe nezinto eziphilayo.
Isigaba sokugcina - a division of insimu matasa ku 4 zone kanye ukuthunyelwa amabutho NATO emizini ngobukhulu. Njengoba kushiwo imibhalo: "ukunakwa Special ikhokhelwa ukubhujiswa ezingokomzimba ngamaKhomanisi. '
AbaseMelika wahluleka ukuqaphela isu yayo "Dropshot" kuhlasela ecebeni Soviet ukuthi ayifakiwe ngenxa isenzakalo olulodwa. ngonyaka 09.03.1949 umshayeli we webhomu American bophezela indiza phezu elwandle eliKhulu iPacific, ngosizo kumadivayisi eqondiswa kakhulu ukwandisa radioactivity emkhathini. Emva ekucubunguleni idatha, nePentagon Wadumala kakhulu: uStalin uvivinya amabhomu enuzi.
asilandelwanga, Truman asabela ngayo mlayezo yena ngempela. Kuphela ngemuva kwesikhathi esithile kukhona ulwazi mayelana nalo ku cindezela. Uhulumeni esatshwe impendulo engakufanelekele a netwetwe kubantu abavamile. ososayensi nePentagon usuthole indlela yokuphuma ngokunikeza umongameli entsha yentuthuko, ibhomu ezibhubhisa kakhulu - hydrogen. Kufanele nakanjani babe phezu izingalo US ukuze nginqobe namaSoviet.
Naphezu isimo esinzima ezezimali nezomnotho ekudalweni we ibhomu le-athomu eSoviet Union abasasilele emuva amaMelika iminyaka 4 ubudala!
Ikhumbula ukuthi kuzokwenzekani, "Dropshot" - uhlelo zokuhlasela iSoviet Union ngamandla amakhulu wawuzofekela. Zonke iphutha kwakungamadodana lesayensi nokuthuthuka kanye zobuchwepheshe ezilandelayo zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa:
08.20.1953 ngonyaka - eSoviet cindezela olusemthethweni simemezelo senziwe ukuthi yayiqhutshelwa ukuhlolwa hydrogen ibhomu.
10/04/1957, wethulwa ku Earth orbit satellite lokuqala, elalingelamaFilisti eSoviet Union. It kwakuyisiqinisekiso sokuthi nangomcibisholo kwebanga InterContinental, ukuze Melika isidlulile ukuba "ukuzamukela".
Ososayensi kufanele ukubonga ukuthi impendulo Soviet US "yokungena" ithuthukiswe izimo post-yimpi. Kwakuwumsebenzi yabo nobuqhawe avunyelwe isizukulwane esilandelayo akusho ufundani kulokho okwenzeka kuwo siqu, yini "Dropshot" - USSR ekubhujisweni uhlelo "iThrojani" noma "Fleetwood" - imisebenzi efanayo. ukuthuthukiswa yawo yaholela silinganiso enuzi kanye ukubeka abaholi bezwe ngenxa yezingxoxo ithebula elilandelayo, ehambisana ne-nokuncipha kwenani kwezikhali zenuzi.
"Sherman" vs. "Tiger". Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha kweMpi Yezwe II
Ezinhlwini Military ku Russia tsarist. ezinhlwini Military ebuthweni imperial
British-Hong Kong (British Hong Kong) - Umlando. zamazwe ayengaphansi British
Kungani ukhubaze inthanethi nokuthi ukwenza
Indawo yokudlela "Tokyo", Vladivostok: imenyu, amakheli, ukubuyekezwa. Sushi ibha "Tokyo". Inethiwekhi ye-Japanese cuisine zokudlela
Umuthi 'FEMAZH MPS ukulawula isisindo': Izibuyekezo nodokotela abathengi, isicelo ukulungiswa
Phansi nge-abandayo efulethini, noma indlela ukuguqula amawindi plastic kwimodi ebusika
Tiger Tasmanian noma impisi Tasmanian